Cesc Fabregas Mise David Silva?, Kevin De Bruyne Mise N’Golo Kante?: Ayaa Ka Soo Muuqday Shaxda Isku Darka Chelsea Vs Man City Ee Ka Hor Kulanka Stamford Bridge? – WWW.Gool24.net
Cesc Fabregas Mise David Silva?, Kevin De Bruyne Mise N’Golo Kante?: Ayaa Ka Soo Muuqday Shaxda Isku Darka Chelsea Vs Man City Ee Ka Hor Kulanka Stamford Bridge?
Wargaysyada iyo khabiirada kubbada cagta ayaa inta badan kulamada waa wayn ka hor waxay soo xushaan shaxaha isku dhafka ah ee labada kooxood ee waa wayn ee kulan xiiso badan iskaga hor imanaya, waxayna inta badan ku saleeyaan qaab ciyaareedka ciyaartoyda markaas ay labada kooxood haystaan. Waxaa meesha laga saaraa ciyaartoyda dhaawaca ah ee aan la filayn in ay kulanka ciyaaraan taas oo ciyaartoy aan boos heleen fursad u noqota.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shaxda isku darka Chelsea iyo Manchester City laga sameeyay ee ka hor kulanka Stamford Bridge ay ugu balansan yihiin Antonio Conte iyo Pep Guardiola. Inkasta oo ay labada kooxoodba xaalado fiican ku jiraan, haddana Man City ayaa kulamadii ugu danbeeyay guulo waa wayn iyo goolal badan soo gaadhay taas oo saamayn wayn ku yeelatay shaxdan balse sidoo kale Blues ayaa xidigo muhiim ah shaxdan ka heshay.
Shaki la’aan shax kasta oo isku dar ah oo laga samaynayo Manchester City iyo Chelsea waxaa goolka ku soo bilaabanaya Thibaut Courtois kaas oo ayna Ederson iyo Bravo la tartami karin haddii ay isku koox yihiin, sidaa daraadeed Thibaut Courtois ayaa loo doortay in uu shaxdan goolka ugu jiro.
Difaaca midig waxaa u tartamay Cesar Apilicueta iyo Kyle Walker waxaana gacanta sarre yeeshay xidiga ree Spain kaas oo door layaableh ka soo ciyaaray guulihii ay Chelsea soo gaadhay inkasta oo Kyle Walker laftiisu uu door muuqda ku lahaa saamaynta Sky Blues basle Azpilicueta ayaa difaaca midig loo doortay.
Iyada oo David Luiz uu ganaax ku maqan yahay waxaa difaaca dhexe ku wada jira John Stones iyo Christensen iyada oo Otamendi, Antonio Rudiger iyo Garry Cahil ayna labadan boos ka soo muuqan. Christensen ayaa la filayaa in uu difaaca dhexe ee Blues uu ku soo bilaaban doono halka Stones uu muhiim ka noqon doono shaxda Guardiola.
Iyada oo Benjamin Mendy uu qaliin maray isla markaana uu muddo dheer garoomada ka maqnaan doono waxaa difaaca bidix si sahlan ugu guulaystay Marcos Alonso oo ah hubka qarsoon ee uu Antonio Conte cadowgiisa ku dilo isaga oo Danilo booskan ku garaacay.
Khadka dhexe waxaa shaxdan ugu soo baxay David Silva iyo Kevin De Bruyne oo ku jira qaab ciyaareed aan caadi ahayn waxayna meesha ka saareen Cesc Fabregas, N’Golo Kante, Bakayoko iyo waliba Fernandinho oo ay isku koox yihiin waxayna Silva iyo De Bruyne shaxdan ugu jiraan khadka dhexe.
Raheem Sterling iyo Leroy Sane oo bandhigyo cajiib ah soo sameeyay ayaa shaxdan ugu jira garabaha weerarka ee midig iyo bidix iyada oo Eden Hazard aanu wali shaxda Antonio Conte ee kulamada Premier Leaque aanu wali ku soo bilaaban taas oo xidiga ree Belgium u diiday in uu shaxdan ka soo muuqdo si la mid ah Victor Moses oo aan la qaab ciyaareed ahayn xili ciyaareedkan Sane ama Sterling.
Ugu danbayn waxaa shaxdan weerarka ugu jira Gabriel Jesus iyo Alvaro Morata iyada oo Sergio Aguero uu shil gaadhi ku dhaawacmay taas oo keentay in si sahlan ay labadan xidig weerarka ugu midoobeen. Marka la eego tayada iyo hibada ciyaareed ee ay leeyihiin 11 kan ciyaartoy waxay u muuqataa in ay tahay shax cajiib ah balse aan ahayn shaxdii ugu fiicnayd ee laga soo xulan karay Chelsea iyo Man City sababo dhaawac, ganaax ama qaab ciayareed oo saamayn ku yeeshay.
Haddaba halkan kaga bogo shaxda Isku Darka Man City iyo Chelsea oo dhamaaystiran:
Haddba akhriste shaxdani ma tahay shaxda ugu fiican ee laga soo xulan karo isku darka Chelsea iyo Manchester City ee ka hor kulanka Stamford Bridge iyada oo lagu xisaabtamayo ganaaxyada, dhaawacyada iyo waliba bandhiga ciyaartoyda labada kooxood?